ကမ္ဘာကျော် ကြယ်ပွင့်တွေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား သူတိုရဲ့ကားများ | CarsDB
ကမ္ဘာကျော် ကြယ်ပွင့်တွေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား သူတိုရဲ့ကားများ
ကမ္ဘာကျော်ကြယ်ပွင့်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ သူတို့စီးတဲ့ကားတွေက ထိပ်တန်းတွေချည့်ပါ။ ဒါပေမယ့် အခုဖေါ်ပြပေးမယ့်ကားတွေကတော့ အဲဒီကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ ထိပ်တန်းကားတွေထဲကမှ သူတို့ကိုယ်တိုင် ထူးထူးခြားခြားနှစ်သက်စွာ မောင်းနှင်စီးနင်းခဲ့ကြတဲ့ ကားတွေပါ။ ဘယ်လိုကားတွေဖြစ်မလဲ? တစ်ချက်လောက်....
၁။ Justin Bieber - 1965 Lincoln Continental
JB မှာက ပြိုင်ဘက်ကင်း၊ ဈေးအရမ်းကြီးတဲ့ ကား ၅ စီးလောက်ရှိတယ်ဗျ။ အရောင်တွေကတော့ JB အကြိုက်ဆုံးအရောင်ဖြစ်တဲ့ matte black တော်တော်များပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကားတွေအားလုံးဟာ တန်ဖိုးကြီး၊ ပြိုင်ဘက်ကင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့အပြင် အရောင်ကလည်း JB အကြိုက်ဆုံး အရောင်တွေချည့်ဆိုတော့ အပြင်ထွက်ဖို့ ဘယ်ကားစီးရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရတော်တော်ခက်မယ့်ပုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့ပရိတ်သက်တွေရွေးချယ်ပေးတဲ့ JB အသုံးဆုံးကားကတော့ သူ ၂၁ ပြည့်မွေးနေ့တုန်းက လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ 1965 Lincoln Continental ဖြစ်ပါသတဲ့။
၂။ David Beckham - Aston Martin V8 Vantage convertible
JB ပြီးတော့ DB ပေ့ါ။ တစ်ချိန်တုန်းက အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကရဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် မင်းသားတစ်ပါးလို့ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ နာမည်ကျော် ဘောလုံးသမားအများစုလိုပါပဲ။ David ဟာလည်း မော်တော်ကား ချစ်သူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့မှာလည်း ရှားရှားပါးပါး၊ တန်ဖိုးကြီးကြီး စုဆောင်းထားတဲ့ ကားတွေအများကြီးပါပဲ။ အဖေကောင်းတစ်ယောက်၊ ယောက်ကျားကောင်းတစ်ယောက်၊ မော်ဒယ်၊ Brand ambassador စတဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်တွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ David နဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်ဇနီး Victoria တို့စီးနင်းမှုအများဆုံးကားအဖြစ် သူ့တို့ပရိတ်သက်တွေရွေးချယ်ပေးထားတာကတော့ Aston Martin V8 Vantage convertible ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဂန္ထဝင်ကားတစ်စီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Nicki Minaj - Lamborghini Aventador
ကမ္ဘာကျော်တွေနဲ့ Lamborghini ဟာ ခွဲခြားလို့မရတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါ။ Nicki စီးတဲ့ Lamborghini Aventador ကတော့ $400K လောက်အဖိုးတန်ပါတယ်။ အရောင်အသွေးကတော့ Nicki အကြိုက်ဆုံးအရောင်၊ ပန်းရောင်ပါ။ အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ bright matte pink ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကားကို Nicki စစီးတုန်းကဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ Lamborghini ပရိသတ်တွေက Lamborghini ရဲ့အရောင်အသွေးကို Nicki ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီလို့ ဝိုင်းဝေဖန်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဘယ်သူတွေဘာတွေပြောပြော Nicki ဟာ ဒီ ပန်းရောင် Lamborghini ကို အခါအားလျော်စွာ အသုံးပြုနေဆဲပါပဲ။
၄။ Kylie Jenner - Ferrari 458 Italia
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကိုကိုတွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သူတွေထဲမှာ Kylie Jenner လည်း ထိပ်ဆုံးနေရက ပါဝင်ပါတယ်။ မော်တော်ကားနဲ့ပတ်သက်ရင် ငွေကို ဖောဖောသီသီအသုံးပြုလေ့ရှိသူ Kylie Jenner ဟာ တန်ဖိုးကြီး ကားအချို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်အတွင်း သူ(မ) အသုံးများတဲ့ကားကတော့ Ferrari 458 Italia ပါ။ Instagram မှာ Mercedes G Class SUV နဲ့ပုံတွေ အများကြီးတင်တတ်ပေမယ့် သူ(မ)အနှစ်သက်ဆုံးကတော့ Ferrari ဖြစ်ပုံပါပဲ။ နောက်တစ်ခုက ဒီ Ferrari 458 က သူ(မ)ရဲ့မွေးနေ့မှာ သူ(မ)ချစ်သူက လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကားတစ်စီး ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၅။ Jay-Z - Maybach Exelero
Jay-Z ရဲ့ကားကို ဒီစာရင်းမှာ ထည့်ဖို့ဆိုရင် သိတဲ့သူတွေ ကြိုပြီးခန့်မှန်းလို့တောင် ရနေလောက်ပြီ။ သိကြတဲ့အတိုင်း platinum ဓါတ်ပြားဆုတွေအများကြီး သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ နာမည်ကျော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ Jay-Z ရဲ့ကားဂိုထောင်ထဲမှာ နာမည်ကျော်ကားတွေကလည်း အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် နှစ်ရှည်လများ သူစီးလေ့ရှိတဲ့ကားကတော့ Maybach Exelero ဆိုတာ အားလုံးက သိကြပါတယ်။ V12 အင်ဂျင်၊ 700 HP ထွက်တဲ့အဲဒီကားဟာ တစ်နာရီ မိုင် ၆၀ နှုန်းကို ၄ စက္ကန့်ထဲနဲ့တင်လို့ရတယ်လေ။ တန်ဖိုးကိုလည်း ကြည့်ပါဦး။ $8M ပါ။
၆။ Kendall Jenner - 1969 Chevrolet Camaro SS Convertible
အခုအချိန်မှာ ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး ဘီလီယံနာဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ Kendall Jenner မှာ သူ(မ) စွဲစွဲမြဲမြဲစီးလေ့ရှိတဲ့ ကားရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ 1969 Chevrolet Camaro SS Convertible ပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်က နာမည်ကျော် မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အပြင် အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချရာကနေ ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန် ဘီလီယံနာတစ်ယောက်ဖြစ်လာသူ Kendall Jenner ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး Chevrolet ဟာ သူ(မ) မမွေးခင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၆ တုန်းက ထုတ်ထားတဲ့ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ Drake - Mercedes-Maybach S 600 Pullman
“Whatatime to be alive” သီချင်းထွက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင် ကမ္ဘာကျော် rapper Drake ဟာ သူအရမ်းကြိုက်နေခဲ့တဲ့ ဒီကားအကြောင်းကို သီချင်းထဲမှာတောင် ထည့်ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ သူဝယ်ထားတာ Mercedes Pullman ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ မကြားဖူးရင် Google မှာ ရှာဖွေနိုင်တဲ့အကြောင်း ထည့်ဆိုထားတာပါ။ အဲဒီ Mercedes-Maybach S 600 Pullman ဟာ ဇိမ်ခံကားတစ်စီးဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်က $5.5M အထက် အဖိုးတန်ပါတယ်။
၈။ Simon Cowell – Bugatti Veyron
တစ်နှစ်တာအတွင်း $95M လောက်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့သူ၊ idol ဘုရင်ကြီး Simon Cowell ကတော့ Bugatti ကို အထူးနှစ်သက်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူလိုလူမျိုး Bugatti ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်း တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာတော့ မရှိလှပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ချောမွတ်ပြောင်လက်နေတဲ့ အနက်ရောင် Bugatti ဟာ $1.7M လောက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
၉။ Leonardo DiCaprio – Fisker Karma EV Speedster
ကမ္ဘာကျော်မင်းသား Leonardo နှစ်ခြိုက်ခဲ့တဲ့ ကားကရော ဘယ်လိုကားမျိုးဖြစ်မလဲ။ Leonardo ဟာ Fisker လို့ခေါ်တဲ့ Hybrid ကားကုမ္ပဏီမှာ သူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ရုံတင်မကဘဲနဲ့ Fisker Karma EV Speedster ကိုပါ အချိန်အတော်ကြာကြာ ဝယ်ယူမောင်းနှင်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ တန်ဖိုးကတော့ $600K လောက်တန်ပါတယ်။ Fisker Karma ဟာ သူတို့ရဲ့ နည်းပညာခိုးယူသုံးစွဲထားတယ်ဆိုပြီး Tesla ရဲ့ တရားစွဲဆိုခြင်းခံခဲ့ရပေမယ့် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ရမှာတော့ Fisker က အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။
၁၀။ Beyonce Knowles – 1959 Rolls Royce Silver Cloud II Convertible
အခုတော့ သူ(မ) အဲဒီကားကို သိပ်မစီးတော့ပါဘူး။ သူ(မ) အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့်တုန်းက Jay-Z က suprise လုပ်ခဲ့တဲ့ကား။ သူ(မ) မြတ်မြတ်နိုးနိုးစီးခဲ့တဲ့ကား။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်ထုတ် Rolls Royce Silver Cloud II Convertible ပါ။ ဒါဟာ အောင်မြင်သူတွေရဲ့ ချစ်သက်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သလို ဂန္ထဝင်အလှတရားတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေဆဲပါ။ တန်ဖိုးကတော့ $1M ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။
Ref: 10 Unique Celebrity Cars by Amandalina Letterio
စာရေးသူ : စိုင်းဆိုင်(ရန်ကုန်)
ကမ်ဘာကြျောကွယျပှငျ့တှေ ဖွဈကွတဲ့အတိုငျးပါပဲ။ သူတို့စီးတဲ့ကားတှကေ ထိပျတနျးတှခေညျြ့ပါ။ ဒါပမေယျ့ အခုဖျေါပွပေးမယျ့ကားတှကေတော့ အဲဒီကောငျးပဆေို့တဲ့ ထိပျတနျးကားတှထေဲကမှ သူတို့ကိုယျတိုငျ ထူးထူးခွားခွားနှဈသကျစှာ မောငျးနှငျစီးနငျးခဲ့ကွတဲ့ ကားတှပေါ။ ဘယျလိုကားတှဖွေဈမလဲ? တဈခကျြလောကျ....
JB မှာက ပွိုငျဘကျကငျး၊ ဈေးအရမျးကွီးတဲ့ ကား ၅ စီးလောကျရှိတယျဗြ။ အရောငျတှကေတော့ JB အကွိုကျဆုံးအရောငျဖွဈတဲ့ matte black တျောတျောမြားပါတယျ။ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ကားတှအေားလုံးဟာ တနျဖိုးကွီး၊ ပွိုငျဘကျကငျးတှဖွေဈကွတဲ့အပွငျ အရောငျကလညျး JB အကွိုကျဆုံး အရောငျတှခေညျြ့ဆိုတော့ အပွငျထှကျဖို့ ဘယျကားစီးရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖွတျရတျောတျောခကျမယျ့ပုံပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ပရိတျသကျတှရှေေးခယျြပေးတဲ့ JB အသုံးဆုံးကားကတော့ သူ ၂၁ ပွညျ့မှေးနတေု့နျးက လကျဆောငျရရှိခဲ့တဲ့ 1965 Lincoln Continental ဖွဈပါသတဲ့။
JB ပွီးတော့ DB ပေ့ါ။ တဈခြိနျတုနျးက အင်ျဂလနျဘောလုံးလောကရဲ့ လြှမျးလြှမျးတောကျ မငျးသားတဈပါးလို့ဆိုရငျ မမှားပါဘူး။ နာမညျကြျော ဘောလုံးသမားအမြားစုလိုပါပဲ။ David ဟာလညျး မျောတျောကား ခဈြသူတဈယောကျပါ။ သူ့မှာလညျး ရှားရှားပါးပါး၊ တနျဖိုးကွီးကွီး စုဆောငျးထားတဲ့ ကားတှအေမြားကွီးပါပဲ။ အဖကေောငျးတဈယောကျ၊ ယောကျကြားကောငျးတဈယောကျ၊ မျောဒယျ၊ Brand ambassador စတဲ့ ဂုဏျဒွပျတှအေမြားကွီးပိုငျဆိုငျထားတဲ့ David နဲ့ သူ့ရဲ့ခဈြဇနီး Victoria တို့စီးနငျးမှုအမြားဆုံးကားအဖွဈ သူ့တို့ပရိတျသကျတှရှေေးခယျြပေးထားတာကတော့ Aston Martin V8 Vantage convertible ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ ဂန်ထဝငျကားတဈစီးလညျးဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာကြျောတှနေဲ့ Lamborghini ဟာ ခှဲခွားလို့မရတဲ့ အမှတျတံဆိပျတဈခုပါ။ Nicki စီးတဲ့ Lamborghini Aventador ကတော့ $400K လောကျအဖိုးတနျပါတယျ။ အရောငျအသှေးကတော့ Nicki အကွိုကျဆုံးအရောငျ၊ ပနျးရောငျပါ။ အတိအကပြွောရမယျဆိုရငျတော့ bright matte pink ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီကားကို Nicki စစီးတုနျးကဆိုရငျ တဈကမ်ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ Lamborghini ပရိသတျတှကေ Lamborghini ရဲ့အရောငျအသှေးကို Nicki ဖကျြဆီးလိုကျပွီလို့ ဝိုငျးဝဖေနျခဲ့ကွပါသေးတယျ။ ဘယျသူတှဘောတှပွေောပွော Nicki ဟာ ဒီ ပနျးရောငျ Lamborghini ကို အခါအားလြျောစှာ အသုံးပွုနဆေဲပါပဲ။
ဆယျကြျောသကျအရှယျကတညျးက တဈကမ်ဘာလုံးက ကိုကိုတှကေို ဖမျးစားနိုငျခဲ့သူတှထေဲမှာ Kylie Jenner လညျး ထိပျဆုံးနရေက ပါဝငျပါတယျ။ မျောတျောကားနဲ့ပတျသကျရငျ ငှကေို ဖောဖောသီသီအသုံးပွုလရှေိ့သူ Kylie Jenner ဟာ တနျဖိုးကွီး ကားအခြို့ကို ပိုငျဆိုငျထားပမေယျ့ လှနျခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှဈအတှငျး သူ(မ) အသုံးမြားတဲ့ကားကတော့ Ferrari 458 Italia ပါ။ Instagram မှာ Mercedes G Class SUV နဲ့ပုံတှေ အမြားကွီးတငျတတျပမေယျ့ သူ(မ)အနှဈသကျဆုံးကတော့ Ferrari ဖွဈပုံပါပဲ။ နောကျတဈခုက ဒီ Ferrari 458 က သူ(မ)ရဲ့မှေးနမှေ့ာ သူ(မ)ခဈြသူက လကျဆောငျပေးခဲ့တဲ့ ကားတဈစီး ဖွဈနတောကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
Jay-Z ရဲ့ကားကို ဒီစာရငျးမှာ ထညျ့ဖို့ဆိုရငျ သိတဲ့သူတှေ ကွိုပွီးခနျ့မှနျးလို့တောငျ ရနလေောကျပွီ။ သိကွတဲ့အတိုငျး platinum ဓါတျပွားဆုတှအေမြားကွီး သိမျးပိုကျထားတဲ့ နာမညျကြျောတဈယောကျအနနေဲ့ Jay-Z ရဲ့ကားဂိုထောငျထဲမှာ နာမညျကြျောကားတှကေလညျး အမြားကွီးပါ။ ဒါပမေယျ့ နှဈရှညျလမြား သူစီးလရှေိ့တဲ့ကားကတော့ Maybach Exelero ဆိုတာ အားလုံးက သိကွပါတယျ။ V12 အငျဂငျြ၊ 700 HP ထှကျတဲ့အဲဒီကားဟာ တဈနာရီ မိုငျ ၆၀ နှုနျးကို ၄ စက်ကနျ့ထဲနဲ့တငျလို့ရတယျလေ။ တနျဖိုးကိုလညျး ကွညျ့ပါဦး။ $8M ပါ။
အခုအခြိနျမှာ ကမ်ဘာ့အသကျအငယျဆုံး ဘီလီယံနာဖွဈနပွေီဖွဈတဲ့ Kendall Jenner မှာ သူ(မ) စှဲစှဲမွဲမွဲစီးလရှေိ့တဲ့ ကားရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ 1969 Chevrolet Camaro SS Convertible ပါပဲ။ ကိုယျတိုငျက နာမညျကြျော မျောဒယျတဈယောကျဖွဈနတေဲ့အပွငျ အလှကုနျပစ်စညျးထုတျလုပျရောငျးခရြာကနေ ကိုယျထူးကိုယျခြှနျ ဘီလီယံနာတဈယောကျဖွဈလာသူ Kendall Jenner ရဲ့ အနှဈသကျဆုံး Chevrolet ဟာ သူ(မ) မမှေးခငျ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၆ တုနျးက ထုတျထားတဲ့ကားလညျး ဖွဈပါတယျ။
“Whatatime to be alive” သီခငျြးထှကျတဲ့အခြိနျတုနျးကဆိုရငျ ကမ်ဘာကြျော rapper Drake ဟာ သူအရမျးကွိုကျနခေဲ့တဲ့ ဒီကားအကွောငျးကို သီခငျြးထဲမှာတောငျ ထညျ့ဆိုခဲ့ပါသေးတယျ။ သူဝယျထားတာ Mercedes Pullman ဖွဈတဲ့အကွောငျး၊ မကွားဖူးရငျ Google မှာ ရှာဖှနေိုငျတဲ့အကွောငျး ထညျ့ဆိုထားတာပါ။ အဲဒီ Mercedes-Maybach S 600 Pullman ဟာ ဇိမျခံကားတဈစီးဖွဈပွီး အဲဒီအခြိနျက $5.5M အထကျ အဖိုးတနျပါတယျ။
တဈနှဈတာအတှငျး $95M လောကျရှာဖှနေိုငျခဲ့သူ၊ idol ဘုရငျကွီး Simon Cowell ကတော့ Bugatti ကို အထူးနှဈသကျခဲ့သူတဈယောကျပါ။ သူလိုလူမြိုး Bugatti ကို နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျစီးခဲ့တယျဆိုတာကလညျး တှကျကွညျ့မယျဆိုရငျ ထူးဆနျးအံ့သွဖှယျရာတော့ မရှိလှပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ခြောမှတျပွောငျလကျနတေဲ့ အနကျရောငျ Bugatti ဟာ $1.7M လောကျတနျဖိုးရှိပါတယျ။
ကမ်ဘာကြျောမငျးသား Leonardo နှဈခွိုကျခဲ့တဲ့ ကားကရော ဘယျလိုကားမြိုးဖွဈမလဲ။ Leonardo ဟာ Fisker လို့ချေါတဲ့ Hybrid ကားကုမ်ပဏီမှာ သူကိုယျတိုငျဝငျရောကျရငျးနှီးမွှုပျနှံခဲ့ရုံတငျမကဘဲနဲ့ Fisker Karma EV Speedster ကိုပါ အခြိနျအတျောကွာကွာ ဝယျယူမောငျးနှငျနခေဲ့ပါသေးတယျ။ တနျဖိုးကတော့ $600K လောကျတနျပါတယျ။ Fisker Karma ဟာ သူတို့ရဲ့ နညျးပညာခိုးယူသုံးစှဲထားတယျဆိုပွီး Tesla ရဲ့ တရားစှဲဆိုခွငျးခံခဲ့ရပမေယျ့ အပွီးသတျအမိနျ့ခမြှတျရမှာတော့ Fisker က အနိုငျရရှိခဲ့တာပါ။
အခုတော့ သူ(မ) အဲဒီကားကို သိပျမစီးတော့ပါဘူး။ သူ(မ) အသကျ ၂၅ နှဈပွညျ့တုနျးက Jay-Z က suprise လုပျခဲ့တဲ့ကား။ သူ(မ) မွတျမွတျနိုးနိုးစီးခဲ့တဲ့ကား။ ၁၉၅၉ ခုနှဈထုတျ Rolls Royce Silver Cloud II Convertible ပါ။ ဒါဟာ အောငျမွငျသူတှရေဲ့ ခဈြသကျလကျဆောငျတဈခုဖွဈခဲ့သလို ဂန်ထဝငျအလှတရားတဈခုလညျး ဖွဈနဆေဲပါ။ တနျဖိုးကတော့ $1M ဝနျးကငျြရှိပါတယျ။
Posted at: 21-03-2019 09:39 AM
ကမ္ဘာကျော် ကြယ်ပွင့်တွေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား...